Fahasalamam-bahoaka : Miainga eny amin’ny fokontany ny ady atao amin’ny pesta, atsangana ny andrimaso -
AccueilRaharaham-pirenenaFahasalamam-bahoaka : Miainga eny amin’ny fokontany ny ady atao amin’ny pesta, atsangana ny andrimaso
Mbola mitana ny sain’ny maro amin’izao fotoana ny ady atao amin’ny valanaretina pesta, ary mbola vaindohan-draharahan’ny fitondram-panjakana. Nifantohan’ny fotoam-bitan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny ady amin’io valanaretina, izay mpiseho isan-taona, ary efa nisy nandritra ny taona maro. Anisan’ny paikady entin’ny fitondram-panjakana ny fitondrana ny ady amin’ny valanaretina pesta miainga eny amin’ny fokontany. « Misy ny ady atao maharitra sy isan-taona amin’izy io. Aretina azo sitranina anefa ny pesta rehefa voatsabo haingana », araka ny fanamarihan’ny filoham-pirenena. Manodidina ny 500 ny trangan’aretina pesta hita tamin’ny distrika 35 hatramin’ny fanombohan’io aretina io ny volana aogositra, ka ny 300 mahery dia pesta amin’ny tratra.
Ho fiatrehina ny ady amin’io valan’aretina io, dia efa novoriana ny lehiben’ny fokontany, ary hatsangana maika ny andrimaso ho an’ny fahasalamana. « Karohina amin’izany ireo olona ahitana ny trangan’aretina, ary arahi-maso ny fisian’ny fahafatesana eny anivon’ny fiarahamonina », hoy ihany ny fanazavana nentin’ny filoha. Nohamafisiny ihany koa fa « momba ny maty dia naleviny tamin’ny toerana efa voafaritra ho amin’izany izy ireo, izay marihina manokana fa tena saro-pady satria tsy azo sokafana raha tsy any, ankoatra ny 15 taona mba hisorohana ny fihitaran’ny aretina ety ivelany ».
Maromaro ireo fepetra samihafa noraisin’ny fitondram-panjakana amin’ny fisorohana ny fipariahan’ny valanaretina, ka ao anatin’izany ny fankatoavana ny drafitra hanoherana amin’ny fomba hentitra ny pesta, ary ahitana ny fanaraha-maso hentitra. « Nosantarina tamin’ny fampahafantarana ny vahoaka ny fisian’io aretina io, tamin’ny alalan’ny famoahana laharana manokana azo antsoina raha misy ny tranga mampiahiahy, toa izany koa ny fandrarana ireo famoriam-bahoaka samihafa », hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Anisan’ireo fepetra ihany koa ny fanemorana ny fidiran’ny mpianatra, ny fandrarahana fanafody ny sekoly, ny fandraisana an-tanàna ny fitsaboana ireo marary, ary ny nomena andraikitra ireo CSBII ,ary nomena fiara hitondrana ny marary any amin’ny toerana manokana hitsaboana ny pesta. Anisan’ireo fepetra noraisina maika ihany koa ny fandrarahana fanafody sy fitiliana any amin’ireo toeram-piantsonan’ny fiarakodia sy ny fiaramanidina mba ahafahan’ny rehetra manohy ny fivezivezena.
Tao anatin’ity fotoam-bita ity, dia nanamarika ny filoham-pirenena fa andraikitry ny rehetra ny ady amin’ny valanaretina pesta. Nisy ny antso avo amin’ny fiaraha-mientan’ny rehetra amin’ny fanaovana ny fanadiovana faobe, ary andrasana tolo-tanana avy amin’ireo malala tanana sy mpirotsaka an-tsitrapo. Efa nanampy antsika amin’ny fiatrehana amin’ny ady amin’io valanaretina io ny sehatra iraisam-pirenena, izay tarihin’ny sampandraharahan’ny firenenana mikambana misahana ny fahasalamana, na ny OMS, izay efa nanome fatrana antibiotika ampy hitsaboana marary hatramin’ny 5000, ary ahafahana miaro olona hatramin’ny 1 hetsy, ary niampy famatsiam-bola 1,5 tapitrisa dolara.
Ankoatra ny fanadiovana, ezaka iray hiadiana amin’ny aretina Pesta ihany koa ny fahatonian’ny rehetra amin’ny fiatrehina ny ady manoloana ny fisian’ireo mpanararaotra manely vaovao tsy marina, ary manao izay hampisavorovoro ny sain’ny vahoaka. « Aoka ny rehetra hanaraka ny toromarika amin’ny onjam-peo sy ny fahitalavitra, ary amin’ireo takela fampahafantarana samihafa. Hamafisiko fa ampy ny fitaovana fitiliana ny pesta eny amin’ny Institut Pasteur, ary ampy ihany koa ny fanafody entina mitsabo », hoy ny fanamarihan’ny filoha.
Nitondra ny teny fampiononana ho an’ireo fianakavian’ireo namoy ny ainy ny filoha, ary nitondra fankaherezana ho an’ireo marary.